Twin Seoul sigaba kwisigaba lwesixhenxe "ngokuvumelana (Reunion)" ngu
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin Seoul sigaba kwisigaba lwesixhenxe "ngokuvumelana (Reunion)" ngu
ukhe [3500 yen mahala apreyizali] ukuya oosiyazi, abantu ababini baye banda ngokwabo omnye komnye ukuze soyise umphefumlo ezintandathu ezimbini kweqonga engena ngenyhek yokomoya, abakhulu kokuba iye kufika ukufumana ingqiqo ulonwabo lusongelwe amandla. Kwaye linqanam wesixhenxe yokugqibela bamkelekile.
ukubambisana kuphela, bobabini baqalisa ukuba ugalele uthando olungenamiqathango naye macala, akukho nto sele eyoyikisayo. Wakuba siyafika kweli nqanaba, enye kwenye wacela omnye kakhulu olude lwavala ego, uya ungafuna ukudibana kwakhona emva kwexesha elide.
kwesi sigaba, uba mnye kufuna elinye iqela, uye uve ukuba uyaphila ukuze ngokuvumelana. Emva koko, ngenkolelo yokuba uthando omnye komnye aliguquguquki, ukuba Sarakedase inyaniso inkangeleko yam ulahle ukuzazisa.
Abantu 2 amandla wathulula uthando olungenamiqathango kubantu umphefumlo amawele kunye kokugquma e
kwisigaba yesithandathu e
? olungenamiqathango Aer anikwe ubudlelwane uthando ngeenxa wonwabile, zonke uxolele njengoko nibe, ezimbini komphefumlo ubangela livakale, kufuneka ube nako ukutsala kwakhona. Kwaye xa udlala sihlangane, sibe nolwalamano ukuba awusebenze ukunika uthando kwelase elinye iqela.
eli xesha, waqonda ukuba ulwalamano lwabo umphefumlo ezimbini into engcwele eye siphendu sibe siphuma kuThixo, siyaqonda ukuba kukho umanyano. Ukuba sele ufikelele kweli nqanaba, uya kuba uThixo wendalo iyintsikelelo. Koko, izinto ezahlukeneyo abantu ababini ulonwabo unikwa, u nga va ilungileyo ulonwabo.
? Hayi umdlali kuphela a
newele Seoul kwakhona malunga nabantu kubulela kunye nothando, abantu ababini ukuba kuye kwakho indlela ukuthanda ngokunyanisekileyo phakathi kwabantu, uthando nazo ngeenxa nje omnye iza uthulule ngesisa. Kukho, zoba ukuba abantu ababini Kufuneka lombulelo luphuphume zonke Lungelelanisela wenza ndithi ihlabathi. Kwaye ukonwaba macala, ezimbini ulonwabo luya kuba kuvuthondaba. Oko Wathi
, akuthethi eliGorha ukuba khona ngoku, iya kutyelela ezininzi ezinzima. Noko ke, ukuxhasa enye nye ngamandla uthando nabantu ababini, kwaye kananjalo banikwe inkxaso evela abantu, kufuneka Ikeru kwakhona ukoyisa iziganeko ezinzima.
Ngoko ke imiphefumlo ezimbini wabhiyozela inyathelo wesixhenxe sigaba _X000D_ lokugqibela uyazala, amawele Seoul wadlala avumelana, akwazi ukugqiba imiphefumlo umzimba zifike yokomoya nqanaba liphezulu kakhulu xiang. Kwaye enye isiqingatha komphefumlo eye wakhangela ngoku, oko kuzaliseka ekugqibeleni ukukhokela.
ukuba eze apha, kufuneka uye ngokusebenzisa Inani lweemvavanyo. Indlela ayikho nangayiphi na indlela iflethi, kufuneka kwakhona ayenza yamibi. Noko ke, ukuba ucinga ukuba phezulu inkqubo omnye komnye ukubulisa ubuhlobo bokwenene, Nijonge ngokwakho kwinqanaba elinye mnye, kubalulekile ukuba uye uxukuxe umphefumlo wakho.
Endaweni yoko, kufuneka kwakhona ayenza yamibi. Noko ke, ukuba ucinga ukuba phezulu inkqubo omnye komnye ukubulisa ubuhlobo bokwenene, Nijonge ngokwakho kwinqanaba elinye mnye, kubalulekile ukuba uye uxukuxe umphefumlo wakho.